I Nepaly (amin'ny fiteny nepaley : नेपाल) na Repoblika Demôkratika Federalin' i Nepaly, dia firenena himalaianina, voaaty, voafaritr' i Sina (faritany mizaka-tenan' i Tibeta) any avaratra, i India any andrefana sy any atsimo ary any atsinanana.
Na dia kely aza, betsaka ny endriky ny faritra any Nepaly, avy amin' ny toetany trôpikaly any atsimo hatramin' ny tendrombohitra avo indrindra eto an-tany any avaratra. Any Nepaly ny valo amin' ny tendrombohitra folo avo indrindra eto an-tany. Misy ny tendrombohitra Everest (Sagarmatha amin' ny fiteny nepaley) mamaritra ny sisin-tany zarain' i Nepaly amin' i Sina.
Nampalaza azy ny zavatra azony ataony amin' ny fizahantany, ny trekking, ny alpinisma, ny VTT, ny safari, ny rafting sy ny tempoly maro sy ny toerana ivavahana.
Ny renivohitr' i Nepaly dia i Katmandu (ara-pôlitika sy ara-pinoana) ary izy no tanàna ngeza indrindra any Nepaly. Ny tanàna hafa manam-pianjadiana dia i Pokhara, i Biratnagar, i Lalitpur (Patan), i Bhaktapur, i Birendranagar, i Hetauda, i Butwal, i Bharatpur, i Siddhartanagar (Bhairahawa), i Birganj, i Janakpur, i Nepalganj, i Hetauda, i Dharan, i Dhangadhi, ary i Mahendranagar.
Ny teny ôfisialin' i Nepaly dia fiteny nepaley ary ny sandam-bola dia ropia nepaley. Misy foko sy kasitra 60 any Nepaly. Ny kasitry ny Chhetri (Kshatriya) dia vondrona maro an' isa any Nepaly (15,8 %-n' ny mponina). Ny kasitry ny Bahun (Brahmana) dia vondrona faharoa any Nepaly (13,3 %n' ny mponina araka ny fanisana tamin' ny 2001). Ny Newar, foko voalohany indrindra nipetraka tao Nepaly dia 5,4 %-n' ny mponina ao Nepaly. Ny fitenin' izareo, ny fiteny neoary dia mbola tenenina ao amin' ny lohasahan' i Katmandu. Ny foko hafa mbola misy ao Nepaly dia ny Herpa, ny Tamang, ny Gurung, ny Thakali, ny Kiranti ary ny Magar.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Nepaly&oldid=1045834"
Voaova farany tamin'ny 18 Jiona 2022 amin'ny 17:18 ity pejy ity.